Plantronics BackBeat Pro 2 - Buyekeza - Izindaba Rule
Plantronics BackBeat Pro 2 – Buyekeza
I Plantronics BackBeat Pro 2 wireless headphones ngomsindo-ukukhansela kukhona pair omuhle kakhulu headphones, okuqhubeka ubudala phakathi amacala, zinokokulawula okuhle, ngomsindo okuqinile esebenzayo ekhansela bese iphrofayli umsindo eziyothokozisa abaningi.
24 amahora ukuphila kwebhetri, Izilawuli okuhle futhi inkatho bass liyokhala omkhulu kwabaningi, kodwa uma ungumuntu fan of umculo we-classic, bheka kwenye indawo
Lesi sihloko osesikhundleni “Plantronics BackBeat Pro 2: Bose-kunomsindo wireless ekhansela imali” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesithathu 1st February 2017 08.30 UTC
Plantronics uthembisa nomsindo top-ekupheleni ekhansela headphones wireless for abaholi emakethe third-ngaphansi kuka, kodwa ingabe entsha BackBeat Pro 2s ukuletha ngempela?
I BackBeat entsha Pro 2s kuphela babe zifana odlulayo ukuba forbears zabo. Gone kuyinto ijamo round esivuna a okweqanda ergonomic more esifanelana emhlabeni izindlebe kunokuba ngokuthinta phezu kwabo kwezinye izingxenye.
Ubathola futhi kuqhubeke bekhululeke kakhudlwana, ne ukulungiswa kuhle ngesikhathi earcup ukuze kuhlaliswe ezihlukile zekhanda. Into eyodwa awayenzi kuyinto bayeke, swiveling kuphela ngakho earcups amanga flat etafuleni, okusho ukuthi ungumuntu Savela ukuthwala azungeze esikhwameni uma ubhekene akawasebenzisi.
I earcup kwesokunxele has a central inkinobho ikhefu-play, Flanking ithrekhi-skip izinkinobho isondo gijima ushintsha volume. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I earcup kwesokunxele has a central inkinobho ikhefu-play, Flanking ithrekhi-skip izinkinobho isondo gijima ushintsha volume. Kukhona switch on the side ejika avuliwe noma avaliwe ngomsindo asebenzayo ekhansela, noma feeds imisindo kwezwe ngaphandle singene headphones usebenzisa imibhobho - ewusizo for ukulalela izimemezelo esitimeleni.
I earcup kwesokudla ine microUSB ukushaja echwebeni, headphones ikhebula izisekelo for Listening olunezintambo, inkinobho amandla ukuthi ubuye omula Bluetooth inkinobho multi-function kwaqala Google Assistant noma Siri and umbhobho inkinobho ebomvu isimungulu ngenxa uma ucingo.
Zonke izinkinobho ukushintshwa uzizwe esiqinile, ngenkathi ivolumu gijima Ukudayela isebenza kahle. I headphones kungaba futhi sime umculo uma ususe kuwo futhi ukuqala ukudlala futhi uma uwafake emuva phezu izindlebe zakho.
Plantronics BackBeat Pro 2 ukubuyekeza – logo Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The old BackBeat Pro headphones babenegunya elikhulu bass, kodwa kwaba kubonakale ziyancipha lapho nomsindo ukwesulwa ivuliwe. The Pro entsha 2 headphones ababuzwa inkinga Ithulisa efanayo okubangelwa asebenzayo ngomsindo ukwesulwa. Empeleni, banayo bass pretty okuphelele nokungathathi izinto oyindilinga - lokungetulu kwekumane yisho Bose QC35 - kodwa abazi kuzwakale kugcizelela ngendlela eyeqisayo eliqhutshwa it. Zonxantathu kusenjalo ngizithole kungukuthi waminzisa out futhi bass kuyinto ebukhali futhi punchy kunokuba enodaka.
Labo ngifuna umsindo elinganiselayo noma kokungathathi hlangothi kuyodingeka abheke kwenye indawo, kodwa Ezwa omkhulu ngisho at Imiqulu ongaphakeme uma wasuthisa electronica futhi lutho nge bass ithrekhi esiqinile. Rock amathrekhi ezifana Layla Eric Clapton ezwakala olukhulu, kodwa into efana Jupiter Holst ezwakala kancane abathuntubezwe futhi ozwakala ngaphandle ukucwazimula ezihlobene ne headphones elinganiselayo.
Good at umsindo wasemuva luvimbe, kodwa hhayi elikhulu uma kukhona ifoni ukukhala nxazonke. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I asebenzayo noise Ikhansela esikhulu siyasebenza kakhulu kokukhipha Drone komsindo injini, kodwa incane kangaka ngokumelene umsindo kungazelelwe ifoni icima noma efanayo esitimeleni lwabagibeli. Umehluko omkhulu phakathi 2s Pro kanye nemakethe-umholi Bose QC35 ngempela ngomsindo wabo yekwentiwa luvimbe - ungakwazi ukuzwa okwengeziwe izingxoxo abakuzungezile ne Pro 2 ekhanda lakho.
The Pro 2s abasekhona namanje nemiphumela engcono kunokuthi kunamanye izimbangi kakhulu, nje ngempela standard igolide ebekwe QC35 ezibizayo.
Bangaphezu kuka ibhethri ngokwanele ukukubona ngokusebenzisa uhambo lwakho. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Plantronics Silinganisa the BackBeat 2s Pro njengoba kuhlongozwe esigatshaneni 24 amahora ukuphila kwebhetri, okuyinto ngalokho Ngathola ukulalela yami. They kwaqhubeka amasonto of beya nokulalela ehhovisi ngomsindo-ukukhansela asebenzayo ngenkathi kuzanywa ukuba bagxile ngokubhala. Ngiyasola ukuthi bazokwenqaba lokho obuyohlala ngisho isikhathi eside ngomsindo ekhansela off noma nge ikhebula.
Ukushaja nge ikhebula microUSB wathatha isikhathi eside kuqhathaniswa, endaweni ethile esifundeni amahora amathathu kusukela flat ngokugcwele, kodwa zinikezwe 24 amahora ukuphila kwebhetri, Ngicabanga ukuthi ukwenza umsebenzi wezandla esiqinile off. Uphole up with a 30 iminithi icala kwaba ngokuqinisekile angaphezu kokwanele ukukubona ngokusebenzisa uhambo lokuya emsebenzini losuku.
I okuqinile kodwa kunalokho okukhulu hard case. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Icala kanzima enikezwa ne-ezibizayo "SE" izinguqulo siqinile kodwa kunalokho bulky travel
Enikeziwe analogo ikhebula akanawo microphone noma umculo Izilawuli kuso
Bluetooth connectivity waba ngesikhathi esihle kakhulu kulo lonke
I Plantronics BackBeat Pro 2 kuyatholakala izinguqulo ezimbili, Pro 2 in brown kubiza £ 220 kanye grey nge kanzima sife icala £ 250.
Ubathola ukhululekile ukugqoka kulalela isikhathi eside ube kuthintwa nice ezifana auto-ikhefu-play uma bawasuse ekhanda lakho. Kodwa labo ababefuna umsindo olinganiselayo futhi okungcono kakhulu nomsindo luvimbe kufanele babheke futhi lapho.
Uma ufuna value omuhle, pair nice-ukuzwakala emhloleni wireless headphones ngomsindo-ukukhansela, ngeke uhambe kude olungalungile ngokuzinqumela BackBeat Pro 2s.
Buhle: ukuphila isikhathi eside kakhulu yebhethri, ntofontofo, ngomsindo okuhle kukhanselwa, bass okuhle, Izilawuli okuhle, Inani okuhle
Bawo: Iphrofayela umsindo ngeke ivumelane wonke umuntu, musa bayeke ikakhulukazi kahle ukuhamba, yekwentiwa nomsindo atihambi todvwa enye engcono
Sony h.ear on Wireless NC headphones ukubuyekeza: nje enamahloni of ayisimanga
Philips SHB9850NC headphones ukubuyekeza: ngomsindo ekhansela ngaphandle kokuphula ebhange
← Nintendo Switch: Yini Silindele Kusukela New Console Samsung Galaxy S8 kanye S8 + obungagutshuzelwe nge 'infinity isibonisi’ →